အဖွဲ့အစည်းအချက်အလက် - Huawei ၏ အကြောင်းအရာ
Huawei ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ?
Huawei သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများကို ဦးဆောင် ပံ့ပိုးပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ ပွင့်လင်းသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တယ်လီကွန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ရက်များ၊ ကိရိယာများ နှင့် ကလောက်ကွန်ပျူတင်းသုံးစွဲမှုတွင် အစွန်းချင်းဆက် နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် ICT အတွက် အများနှင့်ယှဉ်၍ ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ICT နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံနှင့်ဒေသပေါင်း 170 ကျော်မှာ အသုံးပြုနေကြပြီး ၎င်းတို့ဖြင့် သုံးပုံတစ်ပုံထက်မကသော ကမ္ဘာ့လူဦးရေကို ဝန်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ အလုပ်သမားပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် Huawei သည် အနာဂတ် သတင်းအချက်အလက်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မြောက်လာစေရန်နှင့် သာလွန်သော ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့က ကမ္ဘာကြီးအတွက် မည်သည့်အရာများ ကမ်းလှမ်းပေးသနည်း?
ကျွန်ုပ်တို့ ဝယ်ယူသူများအတွက် တန်ဖိုးတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ တယ်လီကွန် ဝန်ဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အတူတကွ၊ Huawei သည် ကွန်ရက်ပေါင်း 1,500 ကျော် တည်ဆောက်ထားပြီး သုံးပုံတစ်ပုံထက်မကသော ကမ္ဘာ့လူဦးရေကို အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်ယူသူများနှင့် အတူတကွ မြို့အန္တရာယ်ကင်းရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် စွမ်းအင်ကဲ့သို့ နယ်ပယ်အသီးသီး၌ အကျိုးထိရောက်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အလိုက်သင့်ပြင်ဆင်နိုင်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့် တွန်းပို့ပေးရန်အတွက် ကန့်သတ်မဲ့ ကလောက်ကွန်ရက်များ အပါအဝင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမြန်ကွန်ရက်များကို အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စမတ်ကိရိယာများနှင့် စမတ်ဖုန်းများဖြင့် အလုပ်ခွင်၊ ဘဝပုံစံ နှင့် ဖျော်ဖြေရေးတွေမှာ လူအများ၏ ဒီဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးသည်။ Huawei သည် ပွင့်လင်းမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို မျှဝေခံစားမှုဟူသော အယူအဆများကို ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားဖက်များနှင့် အရည်အချင်းတူသူများဖြင့် ပူးတွဲတီထွင်မှုမှတဆင့် ကြံ့ခံပြီး သဟဇီဝရှိသော စက်မှုဂေဟစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၏ တန်ဖိုးကို တိုးချဲ့နေပါသည်။ Huawei သည် အခြေခံစံနှုန်းသတ်မှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် လွတ်လပ်သောအသိုင်းအဝိုင်းပေါင်း 300 ကျော်တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အခြေခံစံသတ်မှတ်မှုကို တွန်းအားပေးပြီး ပိုမိုထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ထွက်ပေါ်စေရန် အဆိုပြုလွှာပေါင်း 43000 ခုကို တင်ပြထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကလောက်ကွန်ပျူတင်းသုံးစွဲမှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ-သတ်မှတ် ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှု (SDN)၊ ကွန်ရက်မှီချက်များပုံဆောင်မှု (NFV) နှင့်၊ 5G ကဲ့သို့ ထွက်ပေါ်လာသော နယ်ပယ်များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားဖက်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ဆဲ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားပေးမြဲဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ Huawei သည် အခွန်ဝင်ငွေများ ပေးဆောင်ရုံသာမက အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံများတွင် ICT တန်ဖိုးမြှင့် ကွင်းဆက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်း လှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပို၍အရေးကြီးကောင်း အရေးကြီးနိုင်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအားလုံး အသွင်ပြောင်းရန် တွန်းပို့ပေးမည့် ဆန်းသစ်တီထွင် ICT နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများကို မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပေးဆောင်သဖြင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသလို လူထုဘဝပုံစံများ၏ အရည်အသွေးကိုလည်း များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တွန်းပို့ပေးသည်။ တာဝန်သိ ကော်ပိုရိတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနှင့်၊ Huawei က ဒီဂျစ်တယ်အသုံးချကွာဟနေမှုကို ကျဉ်းသွားစေရန် အရေးပါသော ပံ့ပိုးမှုမျိုး ဖန်တီးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးပေါ်အကြောင်းပြန်ရသော အခြေအနေတွင် တယ်လီကွန်မြူနစ်ကေးရှင်းများ၏ အရေးကြီးပုံကို အထူးတလည် သတိထားမိသည်။ အနောက်အာဖရိက အီဘိုလာ-ရောဂါကပ်ဆိုက်ဒေသများ၊ ဂျပန်ဆူနာမီပြီးနောက် နျူးကလီးယားအဆိပ်ညစ်ညမ်းမှု နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွန်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ဘေးကြီးတို့ဖြင့် ကြုံတွေ့သောအခါ ကပ်ဆိုက်ဒေသများအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေရန် အမြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အရေးပါသော တယ်လီကွန်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ စိတ်ချသေချာစွာ စက်လည်ပတ်နိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ရေရှည်တည်တံ့မှုအပိုင်းဆိုပါက နာဂတ် ပရိုဂရမ်အတွက် နောက်မျိုးဆက် ICT ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသူများကို မွေးထုတ်ပေးပြီး၊ ၎င်းပရိုဂရမ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ လည်ပတ်ခွင့်ပေးသည်၊ သင်တန်းတက်စေသည်၊ ICT လုပ်ငန်းမှာ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံကို ရှာစေသည်။
လုပ်ငန်းစူးစိုက်တဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ခိုင်မာသော တိုးတက်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြင့်လမ်းခင်းပေးသည်။လုပ်ငန်းစူးစိုက်စိတ်ဖြင့် လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာ Huawei ရဲ့ အချက်အချာတန်ဖိုးများမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းလှုံ့ဆောင်စိတ်နှင့်ပင် နည်းလမ်းအများအပြားထဲကနေ သရုပ်သကန် ပေါ်လွင်လာစေသည်။ အလုပ်သမားများအား အကဲဖြတ်၍ ၄င်း၏အလုပ်ရလဒ်များကို သာမက၊ မည်မျှ တာဝန်သိစိတ်ရှိသည့်အချက်ကိုလည်း အခြေခံ၍ မန်နေဂျာများကို ရွေးချယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့များကိုဂလိုဘယ်ဖွံဖြိုးမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခု ခင်းထားပေးပြီး လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များကို ပို၍ကြီးမားသော တာဝန်များပေးကာ ၄င်းတို၏့သက်မွေးမှုလုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်သမားပေါင်း 170,000 ကျော်ကို ၄င်းတို့၏တစ်ဦးချင်းကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းများ၌ လုံလောက်သော သက်ရောက်မှုအားများ ဖြစ်ထွန်းစေပြီး၊ မမေ့နိုင်စရာ ဘဝအတွေ့အကြုံမျိုး ရလာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က မည်သည့်အရာအတွက် ရပ်တည်နေသနည်း?
ပြီးခဲ့သော 28 နှစ်အတွင်း ရာထောင်ချီသော Huawei အဖွဲ့ဝင်များသည် အခြား ရေတိုအခွင့်အရေးသမားပုံစံများနှင့် ဖြတ်လမ်းလိုက်ခြင်းများကို ငြင်းပယ်ရင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အချာလုပ်ငန်းကို မမှိတ်မသုန် အာရုံစိုက်ပြီး ထိန်းသိမ်းလာပါသည်။ မည်သည့်အရာကိုဖြစ်စေ တညီတညွတ်တည်း လက်တွေ့ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ရေရှည်အတွက် နည်းပညာပိုင်း ထိုးဖောက်ကျော်လွှားမည့် အကောင်းဆုံးအချိန်များဆီသို့ ဦးတည်ထားသော လုံ့လဖြင့် အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်လာပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာဗဟိုချက်ကို ထိန်းသိမ်းသော ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းရည်ကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် သုံးသူဖောက်သည်ဗဟိုပြု၍ ရပ်တည်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစူးစိုက်မှု စေ့ဆော်စိတ်ရှိခြင်း နှင့် မိမိလုံ့လထင်ဟပ်မှု ကြီးထွားစေခြင်းလိုမျိုး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အချက်အချာတန်ဖိုးများဆီ ဆိုက်ရောက်စေပါသည်။
2015 တွင် မှတ်သားဖွယ်ရလဒ်များ
Huawei ၏ ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 37% တိုးလာကာ၊ 2015 ခုနှစ်တွင် CNY395 ဘီလီယမ်အထိ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ60.8 ဘီလီယမ် နှစ်ကုန်ပိုင်း ငွေလဲနှုန်းဖြင့်) ရောက်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ 4G တပ်ဆင်ပစ္စည်းကို ကမ္ဘာအနှံ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း 140 ကျော်၏ မြို့တော်များတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ 4G ဖြင့် ဝန်ဆောင်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကို ကာကွယ်ရင်း သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် သာလွန်သော အတွေ့အကြုံကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ 4.5G နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းကို မကြာသေးမီက စတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 400G ရောက်တာများဖြင့် စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်ပေါင်း 280 ကျော် တည်ဆောက်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ကလောက်စနစ် တည်ဆောက်ပုံဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း IT နှင့်၊ SDN ဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ရက်များသို့ ဦးတည်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတွန်းပို့ ICT အခြေခံအဆောက်အအုံ (BDII) ဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မှုကို အသုံးပြုပါသည်။ တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဘဏ်၊ တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးဘဏ်၊ ဒွတ်ခ်ျဘဏ်၊ မာစေးဒီးစ်ဘဏ် နှင့်၊ ဝေါ့ဆွာဂန် စသည်ဖြင့် ငွေကြေးချမ်းသာသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီပေါင်း 500 ခန့်သည် Huawei ကို ၎င်းတို့၏ စီးပွားဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်ထားသည်။ ကလောက်ဒေတာစင်တာပေါင်း 255 ခန့် အပါအဝင်၊ ဒေတာစင်တာပေါင်း 660 ကျော် တည်ဆောက်သည့်အပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ 70% ကျော် ကြီးထွားလာပြီး ဈေးကွက်ရှယ်ယာအရ Huawei သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်း device ကုမ္ပဏီ သုံးခုအနက် နေရာတစ်ခု ရထားသည်။ ဤဝင်ငွေတိုးတက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးမများမနည်း အလတ်တန်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အောင်မြင်သောတိုးပွားမှုကြောင့်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စမတ်နာရီများနှင့် ကြံ့ခိုင်သော ပတ်ကြိုးများလည်း ဖက်ရှင်လောကတွင် မုန်တိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ယာဉ်သုံးအင်တာနက် (IoV) တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မော်တော်ကားဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ UX နှင့် ကလောက်ဝန်ဆောင်မှုများတွင် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီး အသုံးပြုပုံအားလုံးဆိုင်ရာ မှန်းခြေဖြစ်စဉ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအရ လိုအပ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျေနပ်အောင် ဖြည့်ဆည်းထားသည်။